Guryaha carruurta iyo dhallinyarada naafada ah
(Boende för barn och ungdomar med funktionsnedsättning)
Qoysaska uu ka tirsan yahay ilmo iyo dhallinyaro u baahan gargaar iyo xannaano naafanimo awgeed wuxuu caawimaad ka heli karaa maamulka degmada.
Gargaarkaasi wuxuu noqon karaa gacansiin ama caawimaad guriga ah, in guriga loo dhiso hab ku habboon ama in loogu deeqo qalab uu addegsado. Wuxuu kaloo noqon karaa guri kale oo ay joogaan shaqaale.
Qofkii doonaya in laga nasiyo qofka naafada ah ama guri gaar ah wuxuu la xiriirayaa maamulka degmada.
Guryaha dadka waaweyn oo naafada ah
(Boende för vuxna med funktionsnedsättning)
Dadka waaweyn oo naafada ah oo aan iyagu ismaamuli karin wuxuu maamulka degmadu ugu deeqayaa gargaar kala duwan.
Waxaa gargaarkaas ka mid noqon kara in guriga loo dhiso hab iyaga ku habboon, ama in loo qabto qof la xiriira oo ka gacan ka siiya hawlaha nololmaalmeedka. Waxay kaloo noqon karaan in hawlaha guriga laga caawino taas oo micnehedu yahay in qof ka socda degmadu uu ka caawino hawlaha guriga.
Waxaa kaloo jira guryo loogu talagalay dadka waaweyn oo naafada ah sida guri ay dad isku mid ahi deggan yihiin gruppbostad, guryaha naafada servicebostad ama stödboende.
Qofka doonaya in hawlaha laga nasiyo ama guryaha naafada u gaarka ah, wuxuu la xiriiri karaa maamulka degmada.
Bogga 1177 Vårdguiden (Hagaha Daryeelka) waxaad ka heleysaa macluumaad ku saabsan taageerada, gargaarka iyo adeegyada loogu talagalay dadka naafada ah iyo qoysaskooda.